Izindaba - SENZA IZINHLANGANO EZIYIZINSUKU ZAMANDLA.
LI-ASTNFRAMETMizingxenye ezinamandla eminyango. Kusuka kwizinsika zomnyango ongaphandle kokubola, kuye ekushayeleni phansi, senza izingxenye zomnyango wangaphandle ezisebenza kangcono, zifake ngokushesha futhi zihlale isikhathi eside.
LI-ASTNFRAMETM inikeza izingxenye zomnyango zezinhlelo zohlelo lokungena kufaka phakathi ama-jambs womnyango owakhiwe, isitini, i-t-astragal, i-mullpost.
Amafreyimu Eminyango aqinile, ahlala isikhathi eside, futhi athuthukisa ikhwalithi nokusebenza komgwaqo lapho kusetshenziswa umnyango wethu. Amafreyimu ethu eza ngezitayela ezahlukahlukene zokusanhlamvu ukugcwalisa noma iyiphi ingaphandle lokwakha.
LI-ASTNFRAMETMizingxenye zomnyango ziyinhlanganisela ye-pvc ekhiqizwa ngaphandle kokubola, ukugoqana nokuqhekeka. Lokhu kungukuqina kohlelo lokungena emnyango.
Iyakhetha LI-ASTNFRAMETM i-jamb yomnyango eyinhlanganisela yokujula okusukela ku-4 intshi kuye ku-10 intshi
Iyakhetha LI-ASTNFRAMETM ama-jambs omnyango ahlanganisiwe wokujula okusukela ku-4 intshi kuye ku-10 inch, ukuthuthuka kohlelo lwakho lomnyango wokungena.
LI-ASTNFRAMETM i-brickmould ehlanganisiwe inezinto ezingenakondliwa, futhi igcwalisa ukuvikelwa kobufakazi bezinye izingxenye zohlaka lomnyango.
LI-ASTNFRAMETM Izinkunzi eziyinhlanganisela zivikela i-rof-proff, zinikeza amandla adingekayo ezinhlelweni zeminyango ye-patio noma amayunithi e-sidelite aqhubekayo.
Izakhi zomnyango nezama-sidelite zengeza ubukhulu futhi zakha izingcezu zokugqamisa eminyango yokungena. I-astragal ayakhi nje kuphela incazelo phakathi kweminyango, kepha ivala igebe lobumfihlo obengeziwe futhi ivimbela ukukhanya ukuthi kungene.
LI-ASTNFRAMETM I-T-astragal eyinhlanganisela ayinakho ukugoba, akukho ukuvuza, inikeza ukuvikelwa okuphephile nokusebenza okunamandla kwezinhlelo zokungena.
LI-ASTNFRAMETMizingxenye zeminyango zinikela ngekhwalithi, ukuphepha nokuvikelwa kwezinhlelo zokungena. Xhumana nathi namuhla ngemibuzo ngezinsimbi zeminyango ye-WPC, ama-T-bar, izitini, kanye nama-T-astragals.